The Last Stronghold of Theravâda Buddhism | မျိုးမြန်မာ
The Last Stronghold of Theravâda Buddhism
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: Buddhism, Islam Virus.	Leaveacomment
ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာလေး ဟာ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးကွဲပေါင်းစုံ အယူဝါဒ ပေါင်းစုံ အတူတကွအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြတဲ့ Multi-Ethnics, Multi-Cultures, Multi-Religions ကမ္ဘာပါ။
အဲဒီလို မတူညီတဲ့ အလှတရားများစွာ စုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အယူဝါဒ တစ်မျိုးတည်း…. လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း …ဘာသာတရားတစ်ခုတည်း…. က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပြီး ..
အဲဒီလို လွှမ်းမိုးဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် ကျင့်ကြံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလိုဆိုလုပ် ဖို့ ညွန်ကြားထားတဲ့ အယူဝါဒ (သို့ )ဘာသာတရား ကို လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး အတွက်ဖျက်ဆီးပစ်ရပါမယ်။
ဘယ်အယူဝါဒတစ်ခုတည်းကမှ ။ ဘယ်ဘာသာ တစ်ခုတည်း ကမှ ၊ ဘယ်လူမျိုး တစ်မျိုးတည်း ကမှ မတူကွဲပြားခြင်းတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ ကမ္ဘာလေးကို မကြီးစိုးရပါဘူး။
ဒါမှသာ – မတူညီတဲ့လူသားအားလုံး – အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပဲ အယူဝါဒတစ်ခုခုက၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စိုးမိုးရမယ်လို့ ညွန်ကြားလုပ်ဆောင်လာခဲ့ရင်တော့ အဲဒီလိုကြိုးပမ်းလာခဲ့တဲ့ အယူဝါဒ၊ညွှန်ကြားမှုဟာ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ Ideology ပါပဲ။
မတူညီတဲ့ အလှတရားများကို ဖျက်ဆီးပစ်မဲ့ “ငါနဲ့ မတူ ငါ့ရန်သူ” ဆိုသလို ” တစ်ကမ္ဘာ လုံး ငါနဲ့ တူရမယ်” ဆိုတဲ့
” တစ်ကမ္ဘာလုံး အစ္စလာမ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်” ဆိုတဲ့ အစ္စလာမ် အယူဝါဒဟာလည်း နာဇီဝါဒ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒတို့ လို့ ရူးသွပ်နေတဲ့ Ideology ပါပဲ။
ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒ၊ နာဇီဝါဒတွေလိုပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွမ်းမိုးရမယ်လို့ ညွန်ကြားထားတဲ့ Qur’an နဲ့ 
လက်တွေ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံက ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံများဧ။် အန္တရာယ်ကို လည်း သတိကြီးစွာ ထားကြရပါမယ်။
ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒ၊ နာဇီဝါဒတွေလိုပဲ Islamic Imperialistic Ideology ကိုလည်း လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး ရဲ့ Multi-Ethnics, Multi-Religions,Multi-Cultures ရှင်သန်စေဖို့ ရာ အတွက် အချိန်မနှောင်းသေးခင် ဖျက်ဆီးပစ်ရပါမယ်။
မတူညီတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ အတူတကွ အေးချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာကြတဲ့ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ ကမ္ဘာလေး မှာ —
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဘာသာတရားတွေ ကို – ရက်ရက်စက်စက်၊ ဖျက်ဆီးခဲ့၊ ဖျက်ဆီးဆဲ၊ ဖျက်ဆီးပစ်မဲ့ – လူ့သမိုင်းတလျှောက် အရက်စက်ဆုံး၊ politico-religious system ဖြစ်တဲ့ ၊
လူ့အသက်သန်းပေါင်း ၂၈၀ကျော်ကို သတ်ခဲ့တဲ့ ၊ ဘာသာပေါင်းစုံကို ရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ၊
ကမ္ဘာ့နယ်မြေ အသီးသီး က ဘာသာပေါင်းစုံကိုချေမှုန်းသိမ်းပိုက်ထားပြီး အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေ ထူထောင်ထားကြတဲ့
နိုင်ငံတိုင်းကို Islamic State တွေ မဖြစ်မချင်း ၊ ဘက်ပေါင်းစုံက အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လုပ်နေတဲ့
တစ်ကမ္ဘာလုံး အစ္စလာမ်မဖြစ်မချင်း ဆက်လက်လည်ပတ်နေအုန်းမဲ့ Islam Qur’an ideology အရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကို အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေပေးနေအုန်းမှာဖြစ်တဲ့
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ Islamic Imperialistic Qur’an ideology အစ္စလမ်ကုရ်အာန် အယူဝါဒကို အပြီးတိုင် Eradicate လုပ်ပစ်ရမည်မှာ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးဧ။် တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို – ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖွားမြင်ရာ အိန္ဒိယ တွင် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ဖျက်ဆီးပြီးပြီ။
ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အင်နိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုလည်း တစ်နိုင်ငံချင်းစီချေမှုန်းသိမ်းပိုက်ပြီး အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းထားပြီးပြီ။
အခုနောက်ဆုံး- ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံ တွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ ကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာကို အပြီးတိုင်အောင်ချေမှုန်းဖျက်ဆီးဖို့ မူဆလင်တွေ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ- ဗလီ ၂၇၀၀ နှစ်ထောင့်ခုနှစ်ရာကျော်
ထိုင်းနိုင်ငံ- ဗလီ ၃၄၀၀ သုံးထောင့်လေးရာကျော်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ -ဗလီ ၅၀၀၀ ငါးထောင်
အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ က ရဟန်းသံဃာတွေကို လည် လှီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်၊ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဘာသာတရားယဉ်ကျေးမှုတွေကို အလုံးစုံချေမှုန်း ပြီး အစ္စလာမ်ဇာတ် သွတ်သွင်းလာခဲ့သော မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်တွေဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံ တွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ ကို ခြိမ်းခြောက်လာနေပါပြီ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံ တွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ၊သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်
ကျွန်တော်တို့ဟာ မူဆလင်နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်ရန်ရှာနေတာမဟုတ်ပဲ။
မူဆလင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င်ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက် ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မူလဘာသာ၊ သာသနာ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ချေမှုန်းဖျက်ဆီး ပြီး – အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းနေခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးတဲ့ – မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးရွားအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ ဧကန်မုချ ကျဆုံးရမည် ။